युवतीले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु – NepalajaMedia
१. साथीको गोप्य कुरा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । कहिले पनि आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डलाई आफ्ना साथीहरुको गोप्यकुरा सुनाउनु हुँदैन किनभने साथीहरुले आफ्ना गोप्यकुरा विश्वास गरेर भनेका हुन्छन् ।
२. पासवर्ड पासवर्डको कुरामा निक्कै सचेत हुनुपर्छ । कतिपय युवतीहरुले भावनामा आएर आफ्ना पासवर्ड प्रेमीसँग शेयर गर्छन् । तर त्यो घातक हुन सक्छ । त्यसैले पासवर्डहरु कहिले पनि भन्नु हुँदैन ।
३. परिवारका कुरा आफ्नो परिवार भित्रका कुरा आफ्नो मनमा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किन भने कतिपय अवस्थामा भावनामा आएर प्रेमीसँग परिवारभित्रका कुरा शेयर गर्दा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।
४. विगतको विषयमा यदि तपाइँ आफ्नो अघिल्लो सम्बन्ध वा कुनै ब्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने प्रेमीलाई सबैकुरा भन्नु राम्रो होइन । बताइहाले पनि पुरै कुरा बताउनु हुँदैन । यस्ता कुरा शेयर गर्दा पनि सम्बन्ध धरापमा पर्न सक्छ ।
Nextघरको मुख्यद्धार अगाडि आउन नदिनुहोस् यस्ता चिज, कहिल्यै हुनेछैन माता लक्ष्मीको प्रवेश